इन्टेक्सको एक्वा प्ले र एक्वा एयर बजारमा, एक्वा एयर किन्दा ८जीबीको मेमोरी निशुल्क - Technology Khabar
» इन्टेक्सको एक्वा प्ले र एक्वा एयर बजारमा, एक्वा एयर किन्दा ८जीबीको मेमोरी निशुल्क
Technology Khabar ४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार
काठमाडौं, ४ फागुन । इन्टेक्स मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सि.जी./इ.ओ. एल ले नयाँ मोडल एक्वा एयर फ्याब्लेट (Aqua Air Fablet) तथा एक्वा प्ले (Aqua Play) बजारमा ल्याएको छ ।
कम्पनीले ल्याएको ५ इन्चको नयाँ फ्याब्लेट फोनमा टीएन (टब्सिट नेमटिक) डिस्प्ले प्रबिधि रहेको छ, जसको रिजोल्यूशन ८५४X४८० पिक्सेल रहेको छ भने १६.७ मिलियन कलर डेफ्ट रहेको छ । यस फोनमा १८७ पि.पि.आई. पिक्सल डेन्सिटी रहेको छ ।
एक्वा एयरमा मा १.२ गिगाहर्जको ड्यूल कोर मिडियाटेक एमटि ६५७२ डब्लु प्रोसेसर राखिएको छ । यसमा ५१२ एमबीको ¥याम तथा ८ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ, जसलाई एसडी कार्डमार्फत ३२ जीबीसम्म पुर्याउन सकिन्छ । २३०० एमएएच ब्याट्री रहेको यस फोनले ८.५ घण्टाको टक टाईम र ३०० घण्टासम्मको स्ट्याण्डबाई टाईम प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
यस फोनमा फ्ल्यास सहितको २ मेगापिक्सलको रियर क्यामरा रहेको छ भने भिडियो कन्फ्रेन्स् गर्न मिल्ने भिजिए फ्रन्ट क्यामरा रहेको छ ।
दुईवटा सिम स्ट्याण्डबाई लाग्ने यो सेट थ्रीजी सपोर्ट गर्दछ । एण्ड्रोयड ४.४ भर्सन किटक्याट अपरेटिङ सिस्टममा आधारित यो फोनमा वाईफाई, वाईफाई हटस्पट, ब्लुटुथ भर्सन ४.०, माइक्रो यु.एस.बी., जि.पि.एस., एफ.एम रेडियो, ३.५ एम एम अडियो ज्याक युक्त यस फोनमा जी सेन्सर, लाइट सेन्सर, प्रोक्सीमिटर लगायतका फीचर रहेको छ ।
यसको बजार मूल्य रू ७,७७७/– छ । यो फोनको साथमा कम्पनीले ८ जिबीको मेमोरी कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै कम्पनीले ल्याएको अर्को फोन एक्वा प्लेमा ड्यूअल सिम लाग्ने र थ्रीजी सपोर्ट गर्दछ । ४ इन्चको टी.एफ.टि डिस्प्ले प्रबिधि रहेको यस फोनमा ८००X४८० पिक्सेल रिजुलसन स्क्रीन रहेको छ । १.२ गिगाहर्जको ड्यूअल कोर मिडियाटेक एमटि ६५७२ डब्लु प्रोसेसर रहेको छ ।
यो फोनमा ५१२ एमबी ¥याम छ भने ८ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ । जसलाई एसडी कार्डमार्फत ३२ जीबीसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
एण्ड्रोयड ललिपप भर्सनमा आधारित यो फोनमा १४०० एमएएच ब्याट्री रहेको छ । भीजीए क्यामरा रहेको यस फोनमा रियर र फ्रन्ट क्यामरा जडित छन् ।
वाईफाई, वाईफाई हटस्पोट, ब्लुटुथ भर्सन ४.०, माइक्रो यु.एस.बी., जि.पि.एस., एफ.एम रेडियो, ३.५ एम एम अडियो ज्याक रहेको कम्पनीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसको बजार मूल्य रू ५,६६६/– रहेको छ ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार